इजकिएल 17 ERV-NE - त्यसपछि - Bible Gateway
इजकिएल 16इजकिएल 18
इजकिएल 17 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
17 त्यसपछि परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो,2“हे मानिसको छोरो, इस्राएलका घरानालाई यो कथा सुनाऊ! तिनीहरूलाई प्रश्न गर यसको अर्थ के हो?3तिनीहरूलाई भन, यो त्यही हो जुन परमप्रभु मेरा मालिकले भन्नुहुन्छु:
“‘एउटा विशाल चील विशाल पखेंटासित लबानोन आउँदैछ।
चीलको धेरै रंगहरू भएको लामो-लामो प्वाँखहरू थिए।
त्यो लबानोनमा आयो अनि देवदारू रूखको टुप्पा लग्यो।
4 त्यो गरूडले त्यो विशाल देवदारूको (लबानोन) रूखको टुप्पो,
चुडाँयो अनि कनान लिएर गयो।
गरूडले व्यापारीको शहरमा त्यो रोप्यो।
5 त्यसपछि गरूड़ले केही बिऊहरू,
(केहीभाग मानिसहरू) कनानबाट गयो।
त्यसले त्यो मलिलो जमीनमा रोप्यो।
त्यसले प्रशस्त पानी भएको छेउमा रोप्यो।
6 बिऊ उम्रियो अनि त्यो दाखको बोट बनियो।
यो बोट राम्रो थियो।
बोट अग्लो थिएन।
तर यो एउटा ठूलो क्षेत्रभरि ढाक्ने गरी फैलियो।
दाखको काण्ड बढ्यो
अनि लामो भएर हाँगाहरू र पातहरू पलायो।
7 त्यसपछि अर्को ठूलो पखेंटा भएको गरूडले दाखको बोट देख्यो।
गरूडको लामो पखेंटा थियो।
दाखको बोटले चाहन्थ्यो कि यो नयाँ गरूडले उसको देख रेख गरोस्।
यसकारण त्यसले आफ्नो जराहरू त्यो गरूड भए पट्टि फैलायो।
यसको हाँगाहरू गरूड भएको पट्टि फैलिन थाल्यो।
यसको हाँगाहरू त्यो खेतदेखि टाढो सम्म फैलिन थाल्यो,
जहाँ यो रोपेको थियो।
दाखको बोटले चाहन्थ्यो नयाँ गरूडले उसलाई पानी हालोस्।
8 दाखको बोट अर्को मलिलो खेतमा सारियो।
यो प्रशस्त पानी भएको भूमिमा रोपिएको थियो।
यसले हाँगाहरू अनि फल दिन सक्थ्यो।
यो एउटा साह्रै राम्रो दाखको बोट हुन सक्थ्यो।’”
9 परमप्रभु मेरो मालिकले यी कुराहरू भन्नुभयो,
“के तिमी सम्झन्छौ कि बोट सफल हुन्छ? अँहँ!
नयाँ गरूडले बोटलाई जमीनदेखि उखेलिदिन्छ
अनि पक्षीले बोटलाई जरासँगै उखेलिदिन्छ।
त्यसले सबै दाख खान्छ।
त्यसपक्षि नयाँ पातहरू सुक्छ अनि मर्छ।
त्यो बोट एकदमै कमजोर हुन्छ।
त्यो बोटलाई जरैसँग उखाल्नका निम्ति शक्तिशाली अस्त्र-शस्त्र
अथवा शक्तिशाली देशको आवश्यकता पर्दैन।
10 के त्यो बोट त्यहाँ बढ्छ जहाँ रोपेको छ? अँहँ!
गरम पूर्वीय बतास चल्ने छ; अनि बोट सुकेर मर्नेछ।
यो त्यहीं मर्छ जहाँ रोपेको थियो।”
11 परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो उहाँले भन्नुभयो, 12 “यो कुराको व्याख्या इस्राएलका मानिसहरूको बीचमा गर, तिनीहरू सधैँ मेरो विरूद्धमा जान्छन्। तिनीहरूलाई यो भन, पहिलो गरूड (नबूकदनेस्सर) बाबेलको राजा हो। ऊ यरूशलेममा आयो अनि राजा तथा अन्य प्रमुखहरूलाई लिएर गयो। उसले तिनीहरूलाई बाबेल लिएर आयो। 13 त्यसपछि नबूकदनेस्सरले राजाको परिवारको एउटा मानिससँग सन्धि गर्यो। नबूकदनेस्सरले त्यस मानिसलाई शपथ गर्नका निम्ति वाध्य पार्यो। यस प्रकार त्यस नबूकदनेस्सरले मानिसलाई राजभक्त राख्ने शपथ गर्यो। नबूकदनेस्सरले यो मानिसलाई यहूदाको नयाँ राजा बनायो। त्यसपछि उसले सबै शक्तिशाली मानिसलाई यहूदाबाट बाहिर निकाल्यो। 14 यस प्रकार यहूदा एक दुर्बल राज्य बनियो, जुन राजा नबूकदनेस्सरको विरूद्ध उठ्न सक्तैनथ्यो। यहूदाको नयाँ राजासँग नबूकदनेस्सरले जुन संधि गरेको थियो त्यो पालन गर्नका निम्ति त्यो मानिस बाध्य भयो। 15 तर यो नयाँ राजाले कुनै न कुनै प्रकारले नबूकदनेस्सरको विरूद्ध विद्रोह गर्ने प्रयत्न गर्यो। उसले सहायताको लागि मिश्रमा राजदूतहरू पठायो। नयाँ राजाले धेरै घोडा अनि सैनिक मागे। यस्तो दशामा के तिमी सम्झन्छौ कि यहूदाको राजा सफल हुन्छ? के तिमी सम्झन्छौ कि नयाँ राजासँग प्रयाप्त शक्ति हुन्छ अनि उसले करार भङ्ग गरी दण्डबाट बाँच्न सक्छ?”
16 परमप्रभु मेरा मालिक भन्नुहुन्छ, “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर वचन दिन्छु कि यो नयाँ राजा बाबेलमा मर्नेछ। नबूकदनेस्सरले त्यो मानिसलाई यहूदाको नयाँ राजा बनायो। तर त्यो मानिसले नबूकदनेस्सरसँग भएको शपथ तोड्यो। यो नयाँ राजाले त्यो सन्धि तोड्यो। 17 मिश्रको राजा यहूदाको राजाको रक्षा गर्नमा समर्थ हुँदैन। उसले धेरै संख्यामा सैनिक पठाउँन सक्छ, तर मिश्रको महान शक्तिले यहूदाको रक्षा गर्न सक्तैन। नबूकदनेस्सरको सेनाहरूले शहरमा अधिकार गर्नका निम्ति कच्चा बाटो अनि माटोको पर्खाल बनाउँछन्। धेरै संख्यामा मानिसहरू मर्नेछन्। 18 तर यहूदाको राजा बाँचेर निक्लन सक्तैन। किनकि उसले आफ्नो सन्धिको उपेक्षा गर्यो। उसले नबूकदनेस्सरलाई दिएको शपथ भङ्ग गर्यो।” 19 परमप्रभु मेरो मालिकले यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्छु कि म यहूदाको राजालाई दण्ड दिन्छु। किनकि उसले मेरो चेताउनीहरूको उपेक्षा गर्यो। उसले हाम्रो करार भङ्ग गर्यो। 20 म आफ्नो जाल फैलाउँछु अनि ऊ त्यसमा फँस्नेछ। म उसलाई बाबेलमा ल्याउँछु अनि हाम्रो मामला त्यहीं फैसला हुनेछ, किनभने उसले मलाई धोका दियो। 21 म उसको सेनाहरू नष्ट पारिदिन्छु। म उसको सर्वश्रेष्ट सैनिकहरू नष्ट पारिदिन्छु अनि बाँचेका मानिसहरूलाई हावामा उडाइदिन्छु। तब तिमीले जान्नेछौ कि म नै परमप्रभु हुँ अनि मैले यो कुराहरू तिमीसित गरें।”
22 परमप्रभु मेरो मालिकले यी कुराहरू भन्नुभयो:
“म लामो देवदार वृक्षको एउटा हाँगा लिन्छु।
म बृक्षको टुप्पाको एउटा सानो हाँगा लिन्छु।
अनि म स्वंय त्यसलाई अग्लो पर्वतमा रोप्छु।
23 म स्वंयले यसलाई इस्राएलको अग्लो पर्वतमा रोप्नेछु।
यो हाँगा एउटा सुन्दर रूखमा परिणत हुनेछ।
यसको हाँगा निक्लन्छ अनि यसले फल दिन्छ,
देवदारको रूखमा परिणत हुन्छ।
अनि यसका हाँगामा सबै प्रकारका चराहरूले गुँड बनाउँनेछन्।
24 “तब अर्को वृक्षले थाहा पाउँछ कि
म अग्लो रूखलाई भूईंमा लडाई दिन्छु
अनि म सानो रूखलाई बढाउँछु।
त्यसलाई लामो बनाउँछु म हरियो रूखलाई सुकाई दिन्छु।
म सुकेको रूखलाई हरियो बनाई दिन्छु
म परमप्रभु हुँ।
यदि मैले गर्छु भने पछि त्यो निश्चय गर्नेछु।”